Xiddig aflaamta Hindiga caan ku ah oo siyaasadda galay - BBC News Somali
Xiddig aflaamta Hindiga caan ku ah oo siyaasadda galay
31 Disembar 2017
Image caption Rajinikanth wuxuu sheegay haddii uusan siyaasadda galin in "dambi uu qoorta u gali doono"
Xiddiga aflaamta Hindiga caanka ku ah, Rajinikanth, oo taageerayaal badan dalka ku leh, ahna mid ka mid ah kuwa ugu mushaarka badan Aasiya, ayaa ku dhawaaqay inuu siyaasadda galayo.
67 jirkan oo inta badan sameeya aflaamta Tamilka ayaa sheegay inuu samayn doono "xisbi isaga u gaar ah" ka hor doorashada soo socota ee golaha shacabka ee India.
Rajinikanth wuxuu sheegay inuu doonayo inuu isbeddel ku sameeyo hanaanka gobolka Tamil Nadu.
Gobolka ayaa siyaasad ahaan wuxuu ahaa mid aan degganayn tan iyo markii ay sannadkii hore geeriyootay wasiiraddii gobolkaas, Jayalalithaa Jayaram. Wasiiradda ayaa iyada qudheeda waxay ahayd qof filimada jisha.
Isagoo ka hadlayey hool ay ka buuxeen taageerayaashiisa, magaalada koofurta India ku taalla ee Chennai, horena loogu aqoon jiray Madras, ayuu Rajinikanth sheegay in ujeeddadiisu tahay "inuu u tartamo dhamaanba 234-ka kursi ee golaha".
"Haddii aanan go'aankan hadda qaadan, dambi ayaa qoorta ii gali doona" ayuu yiri, wuxuuna intaa ku daray "uma samaynayo sababo la xiriira jago, lacag ama magac maadaama aan kulligood haysto".
Image caption Xiddigan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu mushaarka badan Aasiya
Taageerayaasha ayaa dab shidayay, waxayna ku cayaarayeen goobta qoob ka cayaar, ayagoo ku qaylinayey ereyo ay ku taageerayaan Rajinikanth, sida ay sheegtay wakaaladda AFP.
Rajinikanth oo magaciisa dhabta ah uu yahay Shivaji Rao Gaekwad, wuxuu wax ka sameeyey iaa 200 oo filim, tan iyo 1975, kuwaasoo in badan oo ka ka mid ah ay kaalimaha hore ka galeen aflaamta dalkaas laga daawado.
Sannadkii 2016, ayaa filimkiisa Kabali wuxuu noqday mid India aad looga daawaday, wuxuuna filimkaas xuquuqda gadidda oo kaliya ka sameeyey 30 Malyan oo Doollar, ka hor intii aan la shaacin.